एमिरेट्स एयरलाइन, बिग तेल अब दुबईमा नानस्टप उडान गर्दछ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » एमिरेट्स एयरलाइन, बिग तेल अब दुबईमा नानस्टप उडान गर्दछ
डिसेम्बर 18, 2007
(TVLW) - केहि भन्दा बढि भन्दा बढि छैन।
त्यसकारण बिग तेल र बिग फ्रेटको दुबईमा एक चम्किलो नयाँ उडान छ जुन संयुक्त अरब अमीरातको सबैभन्दा चम्किलो गन्तव्य हो र स्वयं घोषित "मध्य पूर्वको प्रवेशद्वार।"
ह्युस्टनको जर्ज बुश अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा पहिलो श्रेणीको सीट fill १२,००० र सुरक्षा क्लियरन्स भर्न यसले सबै लिन्छ।
ह्युस्टनको उद्घाटन एमिरेट्स एयरलाईन सीधी उडान डिसेम्बर3डिसेम्बरको रूपमा उत्रियो न्यूयोर्कदेखि लस एन्जलस र असंख्य टिभी प्रकारका प्रिन्ट पत्रकारहरूको पासलबाट धेरै जोशमा। पानीको तोपको सलामले आगमन बोइंग 777 10 लाई स्प्ल्याश गर्‍यो, जसले १० टन कार्गो र लगभग big०० बिगविगहरू दुबै बाटोहरू १ 300 घण्टाको उडानको बोक्न सक्दछ।
सेवा पहिले नै ठूलो हिट छ। यो दैनिक फेब्रुअरी १ ​​मा जान्छ, पहिलो श्रेणी लागत विचार गरी कुनै सानो उपलब्धि, ब्यापार क्लास, एक कूल $ ,1०००, र नियमित ग्रुन्ट भाडा $ १8,000०० पपमा पछाडि।
इम्मेरेट एयरलाइन्स एण्ड ग्रुपका अध्यक्ष र सीईओ महामहिम शेख अहमद बिन सईद अल-महकटम यस ननस्टप उपलब्धिलाई मनाउन ह्युस्टन आएका थिए। ह्युस्टन एयरपोर्ट प्रणालीका प्रमुख रिक Vacar, यो एयरलिंक किन आवश्यक छ भनेर छलफल गर्दै थियो।
"दुबईमा आधारित सयौं फर्महरू अमेरिकी फर्महरू हुन्," भकारले भने। "सयौं दुबई फर्महरू यहाँ हस्टनमा आधारित छन्। यो एकदम ठूलो सम्झौता हो। ”
भेटले भने कि मागले ह्युस्टनमा अवस्थित विमानहरूलाई नजिकैको न्यू अर्लिन्सको सट्टा दुबै टाढाबाट जोड्न ड्राइभ पुर्‍यायो जुन अझै चरम अवधिको लागि कमान्डरको आवश्यक संख्याको समयतालिकामा काम गरिरहेको छ।
"न्यु अर्लिन्स रिकभरीमा अझै पनी मार्गहरू छन्," भकारले भने। "न्यु अर्लिन्सको विमान सेवाको रिकभरी एकदम राम्रो भएको छ, विशेष गरी दक्षिणपश्चिमी र कन्टिनेन्टल एयरलाइन्सबाट। तिनीहरूले अधिक उडानहरू पाउनको लागि थप व्यवसायहरू पुनर्स्थापित गर्नु पर्छ। ”
सुरक्षा ह्युस्टन हुँदै पश्चिममा पुग्ने मिडियास्टर्नेर्सहरूको लागि प्राथमिक अवरोध हो। अझै पनि कम्तिमा foreign 45 मिनेट लाग्छ यस्तो विदेशी यात्रुहरूलाई प्रशोधन गर्न। सेप्टेम्बर ११, २००१ को टुक्रिएको इमेजरी, आतंकवादी हमलाहरूले सुरक्षा अलार्म बढाउनको लागि शक्ति पनि राख्छ। युएई नेतृत्वलाई आतंककारीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने काममा संलग्न थियो।
तर त्यस्ता चिन्ताहरू सबैका लागि हुँदैन।
केबल समाचार आउटलेटको एक प्यारा बुलबुला दिमागले शेख अहमदलाई हवाईमा सोध्यो कि यदि उसले आफ्नो विस्तार लक्ष्यहरू तीव्र पार्नका लागि कुनै पनि आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त अमेरिकी एयरलाइन्स किनेको छ भने। खबरदार बिरालाको बच्चालाई ठाडो शेख धैर्यतासाथ मुस्कुराएझैँ जसले बच्चालाई लिप्त पारेको छ र बिस्तारै प्रस्ताव राख्यो कि उनी त्यस्तो खरीदमा विचार गरीरहेको विश्वास गर्दैनन्।
राजकुमारले पज हुनुको कारण बुझ्नको लागि अमेरिकी कार्गो टर्मिनलहरूको दुबै खरीदको प्रस्तावित पोर्ट अफ दुबई किन्नको असफलतालाई मात्र हेर्नु पर्छ।
फेब्रुअरी २०० in मा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले दुबई पोर्टमा "मिशन सम्पन्न" भएको संकेत दिए। न्यू योर्क हार्बरको सबैभन्दा ठूलो कार्गो टर्मिनलमध्ये एक, म्यानहट्टनको वेस्ट साइडमा रहेको क्रूज जहाज टर्मिनल चलाउने ब्रिटिश कम्पनी किन्न चाहने विश्व अधिकारीहरू। र फिलाडेल्फिया, बाल्टिमोर र अन्य ठूला पोर्टमा टर्मिनलहरू। ह्वाइट हाउसले प्रस्तावित $ 2006.-अर्ब डलरको निर्णय अन्तिम भएको बतायो।
कांग्रेसले भन्यो: राष्ट्रपति यति छिटो छैन।
आउँदो सुरक्षा कोलाहलले DPW सम्झौतालाई निम्त्याएन र कुनै पनि एयरलाइन स्थानान्तरणलाई मिडियास्ट स्वामित्वमा अकल्पनीय बनाउँदछ। त्यस्तो सौदालाई विचार नगरी कांग्रेसले हवाई कम्पनीको debtण तिर्न करोडौं खर्च गर्ने छ।
तर मलाई चिन्ता छ।
नयाँ बोइंग 777 XNUMX को बोर्डिंगमा, म लक्जरीले ओत लाग्ने आशा गर्दछु र रमाईले नियुक्त गरेको विमान निराश भएन। प्रथम श्रेणी भनेको तपाईंको औंलाको टुप्पिमा तपाईंको आफ्नै पेय पदार्थ ट्रे भएको बटनको स्पर्शमा तपाईंको साइडमा पप अप गर्न तयार हुनु हो। यसको मतलब एक पूर्ण reclineable प्याडेड सीट जुन ओछ्यान ढाँचामा स्लाइड हुन्छ। यसको मतलब मनोरञ्जन विकल्प र इन्टरनेट पहुँचको दायराको साथ उच्च परिभाषा टिभी हो। यसको मतलव विश्व-स्तरीय सुन्दरताहरूले तपाईंलाई पहिलो श्रेणीको केबिन सेवाहरूमा उपचार गर्दछन् जुन तपाईंको समतल सीटबाट सजिलै पहुँच योग्य हुँदैन।
टेक्सासस्थित पियर्सप्ट जनसंपर्क कम्पनी अस्टिनका वरिष्ठ प्रतिनिधि बेन व्हीटलीले भने, "उनीहरूले कुनै पनि वेवास्ता यात्राबाट बाहिरै लिएका छन्।"
यसको मतलब यो पनि छ कि मेरो हवाई सवारी अनुभव सम्भवतः चुचुरोमा पुगेको छ। यो बृक्ष व्यवसाय माथि आयोजित गर्न गाह्रो हुनेछ।
अर्को वाह चालमा, शेख अहमदले आफ्नो ह्युस्टन पर्वभोजको रातको भोजनको लागि रातको मिनेट मेडे पार्क पार्क भाडामा लिएका थिए। अतिथि बाथरूमहरू आगन्तुक लकर कोठामा थिए। करीव 800०० भन्दा बढी पाहुनाहरूले बेसपाथहरू घुमाए, जुन खुला बार क्षेत्र घेरामा थियो। पक्का छैन कि यदि उनीहरूले शैम्पेनको दोस्रो गिलास भन्दा पहिले वा पछिको गरे भने।
मेनू हाइलाइटहरू: जाम्बो गल्फ झींगा jalapeño किवी ग्लेजको साथ र कालो ट्रफफल क्यासिस मस्टर्ड भिनाग्रेटको साथ माइक्रो हरियो सलाद। एन्ट्री बुटरी गोमांसको टेन्डललोइन थियो "मेडलियन" मेरो लागि समाप्त भएन, सेतो परमेसन पालकको साथ टुक्रिएर मसलाएको आलुको माथि सेयर फोइ ग्रासद्वारा माथि थियो। मिठाई एक dulce de leche चीज़केक थियो जुन म फुट्ने डरले छुन सक्दिन।
उत्कृष्ट खाना सिन्डी क्र्राफर्डको साथ एम्सी थियो र केन्नी रोजर्स पछि मनोरन्जनको रूपमा थिए।
रोजर्सलाई बेइज्जत गरिएको थियो तर उसलाई आफ्नो अधिकांश सेटको लागि बेवास्ता गरियो र केही गन्दा टिप्पणीहरू गर्यो। केनी, मेरो ग्रेबार्ड भाई, तीन घण्टाको भोजन नि: शुल्क शीर्ष-शेल्फ बोजको साथ कर्पोरेट पेचेकहरूको लागि विगतमा उसको प्राइम पप स्टार प्यानिंगका लागि दर्शकहरूको ध्यान अवधि बिगार्दछ। यो माथि प्राप्त गर्नुहोस्।
फ्रान्सेली पुलिस भ्याक्सिन पास छापा खाली पेरिस क्याफेहरु
अब हवाई को यात्रा किन? अर्को पटक भ्रमण गर्नुहोस्!
कसरी उड्डयन युकेको ग्लोबलको आधारशिला हुन सक्छ ...
WHO प्रमुख: COVID-१ Global ग्लोबल तेस्रो वेभ यहाँ छ
सस्तो र सबैभन्दा सस्तो अमेरिका मा पाँच तारा यात्रा शहरहरु
पर्यटन फिजी नयाँ सीईओ को घोषणा
मान्छे: पशु परजीवी कीरा औषधि को लागी प्रयोग नगर्नुहोस् ...
सेशेल्सले यात्रा प्रतिबन्धको आरामलाई स्वागत गर्दछ ...
नयाँ कोभिड 19१ ant एन्टिबडी परीक्षण एक every पटक मात्र एक पटक आवश्यक छ।
चीन र रुस द्वारा हवाई मा एक आश्चर्यजनक आक्रमण, ...